Qalliin lagu guuleystay oo lagu sameeyay lafdhabarta ilmo uurka ku jira - Aayaha
Bethan Simpson, waa haweeney 26 jir ah, waxaa loo sheegay in gabadheeda caloosha ku jirta toddobaadkii 20-aad baaritaan lagu sameeyay lagu ogaaday in lafdhabartu kala baxsan tahay.
Hooyo Simpson ayaa noqotay mid ka mid ah haweenkii ugu horreeyay dalka UK ee lagu sameeyo qaliinkii ugu horreeyay ” ee toosinta uurjiifka”
Mrs Simpson ayaa sidan tan sheegtay “Ma dooneyn inaa iska soo tuuro ilmahayga oo aan dareemayay dhaqdhqaasiisa”.
Hooyada ilmahan yar Mrs Simpson ayaa sheegtay in iyada iyo seygeeda Keiron loosoo jeediyay in ilmaha caloosha ku jira ay iska soo tuurto, kaddib markii la ogaaday xaaladeeda, balse go’aanka lagu toosiyay lafhabarta uur-jiifka ayaa garaadkooda ka weyn”.
” Waxaa la ii sheegay inay naafo tahay oo lafdhabarta ka qaloocan tahay, balse ma aysan ahayn, ” ayay tiri Mrs Simpson.
” Waxaan kasoo baxay qaliinka hal saac waxaana isla habeenkii dareemayay dhaqdhaqaaqa ilmaha yar,” ayay tiri Mrs Simpson.
Dominic Thompson, oo ah dhaqtar neerfaha qaabilsan horseedna u ahaa dhaqaatiirti sameysay qaliinkan ayaa ku tilmaamay qaliinka ilmaha yar lagu sameeyay mid “aan la rumeysan karin”.
Sikasataba ha ahaatee, Mrs Simpson ayaa ku boorisay waalidiinta dhigeeda ah inay ka fakaraan qaliin lagu sameeyo caruurta” waxkasta oo suuragal ahna ay ku dhaqaaqaan”.
” Waxkasta ayaa dhici kara oo waa qaliin culus, waana go’aanka ugu culus oo aad qaadaneyso noloshaada,” ayay intaasi kusii dartay.
Qalooca lafdhabarta ayaa ka dhigan ‘lafdhabarta oo kala baxda, waxayna dhacdaa markii lafta hoose iyo hilbaha kore aysan u korin si isku mid ah xiliga uurka yacni ( ka hor toddobaadka lixaad ee uurku jirta)